३३ किलो सुनकाण्डमा चर्चित एसएसपी दिवेश लाेहनी पक्राउ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
३३ किलो सुनकाण्डमा चर्चित एसएसपी दिवेश लाेहनी पक्राउ
बुधबार, बैशाख १९, २०७५ १६:३१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ। महानगरिय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी पक्राउ परेका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन काण्डमा बयान दिन मोरङ पुगेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई पक्राउ पूर्जी थमाउँदै पक्राउ गरिएको जनाइएको छ । केही दिन अघि साढे ३३ किलो सुन काण्डमा बयानको लागि छानबिन समितिले एसएसपी दिवेश लोहनीलाई पत्र काटेको थियो ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित समितिले उनलाई बयानका लागि आज बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ बोलाएको थियो । यसअघि सुनकाण्डमा ६ जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई उच्चस्तरीय छानविन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त समितिलाई सरकारले गठन गरेको हो ।
गत माघको पहिलो साता त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको ३३ केजी सुन काण्डसँगै तीन जनाको शंकास्पद मृत्युले यो प्रकरण धेरै रहस्यमय बन्दै गएको छ । तर यस काण्डका मुख्य तस्कर चूडामणि उप्रेती (गोरे) भने अझै फरार छन्।
PREVIOUS POST Previous post: नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दा पूर्व जनमुक्ति सेनाहरुले राखे यस्तो माग
NEXT POST Next post: कानुन व्यवसायी जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, बैशाख १९, २०७५ १६:३१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, बैशाख १९, २०७५ १६:३१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, बैशाख १९, २०७५ १६:३१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, बैशाख १९, २०७५ १६:३१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, बैशाख १९, २०७५ १६:३१